Zenziwe zenziwe ngeplastiki ye-CPLA, i-bioplastic ethathwe kumbona we-cornstarch, ezi zinto zilahlwayo zi-100% kwimizi-mveliso enenzuzo, esebenza njengeyona ndlela ilungileyo ye-eco-friendly kwizixhobo zeplastiki zesiko. Ngobuchule obunobunkunkqele obunokumelana nobushushu ukuya kuthi ga kwi-100 ° C, ezi seti zeplastikhi zisetwe ngokugqibeleleyo ukuba zidityaniswe nezitya ezibandayo okanye ezishushu kwindawo yakho yokutyela ekhawulezileyo, yokutyela, okanye ideli. Ifaka umphezulu ogudileyo, ezi zinto ze-CPLA zisebenza nzima ukuxhasa ukuhonjiswa nakweyiphi na indawo yokutya.
Njengomvelisi ngobuchule ukusetyenziswa-single iikomityi zokusela kunye isikhongozeli ukutya iminyaka engaphezu kwama-13, kufuneka ubungakanani ezahlukeneyo iikomityi Pla isahlulo, Pla iikomityi ice cream, iikomityi Pla ukusela, U uhlobo PLA iikomityi, deli ikomityi / isikhongozeli, Pla isitya kunye ezineziciko yabo bonke. Iindebe zethu zePLA ezibandayo ziyinto efanelekileyo endaweni yeekomityi zeplastikhi zemveli njengoko iikomityi zethu ziyi-100% yecompostable kwaye enokuboliswa ziintsholongwane. Izinto esizisebenzisayo lilungu losapho lwe-polyester, kwaye into yoqobo yanele kwaye iveliswa ngaphakathi embona
Njengomvelisi ngobuchule ukusetyenziswa-single iikomityi zokusela kunye isikhongozeli ukutya iminyaka engaphezu kwama-13, kufuneka ubungakanani ezahlukeneyo iikomityi Pla isahlulo, Pla iikomityi ice cream, iikomityi Pla ukusela, U uhlobo PLA iikomityi, deli ikomityi / isikhongozeli, Pla isitya kunye ezineziciko yabo bonke.
Lo mboniso bhanya-bhanya wenziwe ngePLA, engenatyhefu ebantwini nakwimeko engqongileyo. Ithoba ngokupheleleyo emanzini nakwikhabhon dayoksayidi phantsi kweemeko ezinokuchumeka kwiinyanga ezi-6, ke le nto ilungile kwaye iyanceda kwaye ukhusele okusingqongileyo kwaye unciphise ungcoliseko. Inobunzima obulungileyo, ukuthwala umthwalo onamandla, ukutywina okuqinileyo, akukho luhlobo lokuvuza kunye nohlobo lokuphuka.